Ịkụpụta cucumbers na ala oghe | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ịkụpụta cucumbers na ala oghe
Kukumba: usoro ziri ezi nke na-eto eto
Ọbụna onye nwere ahụmahụ kachasị mma, onye kụrụ ihe ubi dị iche iche n'ubi ya maka ihe karịrị otu afọ, enweghị ike ịhapụ otu akwa akwa maka cucumbers. Ọ ghọọla ọdịnala - n'oge ọkọchị, anyị na-eto ihe ọkụkụ a, na-anakọta mkpụrụ osisi ahụ, tụba ya n'ime mmiri, n'oge oyi, anyị na-eri nri mkpọ. Ụfọdụ ndị na-eche na ọ dị mkpa ịkụnye akwụkwọ nri ọ bụla n'ime ala na-emeghe, dị ka à ga-asị na ọ bụ n'ụdị mbụ ya, nke a bụ naanị ụzọ isi nweta ihe ndị bara ezigbo uru ma dị ụtọ.
Nile banyere ịzụ cucumbers mgbe ọ kụrụ n'ala, karịa ka ifatilaiza osisi
Kukumba bụ otu n'ime ihe ọkụkụ kachasị achọ, rie ọhụrụ ma ọ bụ mkpọ. Achịcha na pickles - nri nri mbụ anyị na tebụl. Iji na-eto kukumba, ị ga-anwale ma nye ihe oriri niile ihe dị mkpa maka ezigbo owuwe ihe ubi. A bit nke tiori: iwu ndị bụ isi maka inye kukumba Kukumba a na-ewere dị ka ihe ubi kachasị mma.
Mgbe kere cucumbers na-emeghe n'ala, gardeners Atụmatụ
Cucumbers kụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla oge okpomọkụ. Otú ọ dị, ọ bụghị onye ọ bụla maara oge na otu esi esi akụ ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị ka ha wee nweta ihe ubi kachasị mma. Kukumba bụ ihe oriri na-edozi anya nke na-ebute ọtụtụ ihe a chọrọ maka ịgha mkpụrụ na nlekọta. Na osisi kacha mma na nlebara anya nke ọma, osisi ahụ nwere ike ibu ma mịa mkpụrụ ọma na greenhouses na n'èzí.
Nri cucumbers kwesịrị ekwesị n'ọhịa
Na-eto cucumbers n'ọhịa, ọ dị ezigbo mkpa ịgbaso ọnọdụ niile nke usoro a ma hụ nlekọta kwesịrị ekwesị. Ihe kacha mkpa bụ ịme mmiri. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otú e si enweta mmiri cucumbers n'ọhịa iji nweta ọganihu bara uru, nke dị elu. Ọnọdụ maka ịmalite cucumbers Tupu ịmalite ịmalite ihe ubi, ọ dị mkpa ka ị mara onwe gị na ọnọdụ ndị dị mkpa maka mmepe nkịtị nke ihe oriri ahụ.